inkukhu yokudla kwepellet yokudla kwenkukhu,umshini wepelletizer uyathengiswa
Kungakuhle ukuthi uthenge inkukhu yokudla enkukhu yokudla ukuze ushintshe imfucumfucu yezolimo noma izinsalela zokhuni zibe ngamapulangwe enkuni ukuze kufudumale futhi kuphekwe noma uzenzele owakho ukudla kwezilwane, uma unenqwaba yezinsalela zokhuni; noma ungumnikazi wepulazi elikhulu futhi onemfucuza eminingi yezolimo ongayilahla; noma ungumlimi ofuya izilwane, njengenkukhu, amadada, imvu, izinkomo noma izingulube, njll,le inkukhu feed pellet mill kungaba okhethekile izinkukhu feed pellet mill design nge egijima die isikhunta kanye roller ezimile. Izinzuzo zalo mklamo ukusetshenziswa kukagesi okuphansi futhi kusebenza kahle ekwenzeni ama-pellets okuphakela. Le mishini ephathekayo yenkukhu ephathwayo ingacubungula ummbila, amabhontjisi ommbila, utshani, utshani kanye nelayisi irayisi kufakwa emaphanini abolile. Uvele ubeke ummbila wokudla kwenkukhu emhlabathini oshubile bese ufaka i-feedstock emlonyeni okondlayo, khona-ke impahla izocindezelwa emgodini ofayo ngukushayisana phakathi kwesikhunta efayo nabagoquli. Imvamisa igebe phakathi kokufa nabagibeli yi-0.1-0.3mm yokwenza ama-pellets okuphakela. Ubude be-feed pellet bungashintshwa ngommese wokusika. Ungafaka esikhundleni sokufa okucwecwezelayo ukwenza ama-feed pellets ngamamitha ahlukene wezimbobo zokufa. Ngemuva kokuthi i-pellet die isetshenziswe isikhathi esithile, ungayishisa i-oveni bese uqhubeka nokusebenza.
Izicelo Zokuphakelwa Kwezinkukhu Pellet Mill
Lo mshini wezinkukhu wepellet feed ungasetshenziswa ukwenza ama-pellets okuphakela, pellets kawoyela kanye pellets zezilwane zokulala ekhaya, epulazini noma ezitshalweni ezincane ze-pellet. Njengoba isithombe sibonisa, ama-pellets kaphethiloli angasetshenziselwa ukupheka kwasekhaya nokushisa; ama-feed pellets angawokudla izilwane.
Izinto zokuqalisa: Udweshu, bangu, alfalfa, nezinye izinto zokuphaka (oqoshiwe)
Ukusetshenziswa: Njengokudla kwezilwane, okombhede wezilwane
Ingxube: kuxutshwe ngqo (umswakama:12-15%)
Izinto zokuqalisa: Umquba, utshani / hay (oqoshiwe)
Ingxube: cishe ingxenye elinganayo (okuqukethwe umswakama okuphelele: 12-15%)
Okufanele ukwenze Ngaphambi kokuqala Inkukhu Okuphakelayo Pellet Mill?
1. Faka umshini wezinkukhu wepellet endaweni ephephile neyomile.
2. Musa ukusebenzisa i-pellet mill ngamazinga okushisa angezansi 10 degree celsius.
3. Qiniseka ukuthi wonke amabhulukwe namantongomane aqine ngokuphepha ngaphambi kokusebenza.
B. Hlola Run
Ngaphambi kokuqala ukukhiqiza ama-pellets, kubalulekile ukuprinta okufayo ukukwenza kube bushelelezi. Ukuze wenze lokhu, udinga ukulungiselela ufulawa ongu-5kg, 5kg isihlabathi esihle futhi 1.5 ilitha yemifino, bese uxuba izithako ebhakedeni. Olandelayo, qala umshini we-pellet, bese ubeka inani elifanele lezinto ezixubile ku-pellet feed pellet mill bese uzivumela zigijime emgodini ofayo. Kufanele ukwenze lokhu okuphindaphindiwe 40-60 imizuzu.
C. Ngaphambi kokugijima okokuqala, sebenzisa amafutha okugcoba wonke amabhere. U-opharetha kudingeka akwenze lokhu ngokuqasha konke 10 amahora.
D. Setha ingcindezi yamasondo e-roller. Ukuze wenze lokhu, mane uhudule okushonile bese uthola ukuthi kungazungeza ngaphansi kwama-rolling. Igebe phakathi kwe-rollers nokufa kufanele lilawulwe ngaphakathi kwe-0-0-0.3mm.